आईजी शैलेन्द्र खनाल एक्शनमा, पेट्रोल पम्प भुपुलाई राशन ठेक्का ठेकेदारलाई !! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > आईजी शैलेन्द्र खनाल एक्शनमा, पेट्रोल पम्प भुपुलाई राशन ठेक्का ठेकेदारलाई !!
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार ००:११
काठमाण्डौ -सशस्त्र प्रहरी वललाई ७७ जिल्लामा पुर्याएपछि आईजी शैलेन्द्र खनाल एक्शनमा उत्रिएका छन । अघिल्लो साता पिसिसिको वैठक राखेर उनले संगठनको भावी कार्य दिशा तय गरेर एक्शनमा उत्रिएको संकेत दिएका हुन । नयां संरचना लागु भएपछि बसेको पहिलो पिसिसि वैठकले सशस्त्र प्रहरी वलको हलचोकमा रहेको पेट्रोल पम्पलाई पुर्व सशस्त्र प्रहरी संगठनलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पारित गराएका छन । तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति पम्पमा तेल हालेर बस्नु भन्दा उसलाई रचनात्मक काममा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ । आगामी असोजबाट पेट्रोल पम्प भुपु संगठनलाई सञ्चालन गर्न दिने र उपल्लो व्यवस्थापन तथा अनुगमनमा थोरै कर्मचारी खटाईने भएको छ । भुपु संगठनले अन्य आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने तथा वलले पम्मपमा खटिने कर्मचारीहरुकालागी खाजा खर्च र पोशाकको व्यवस्थापन गर्ने पिसिसि वैठकबाट निर्णय भएको वल मुख्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरिसोहि वैठकले सशसत्र प्रहरी वलमा फेरि राशन ठेक्कामा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । दुई वर्ष अघिदेखि राशन वाफतको रकम व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्न थालिए पनि मेस सञ्चालन गर्दा क्वार्टर मास्टरले समयमै रकम नपाउने, सरुवा भएको कर्मचारीले खाएको राशनको रकम नदिने गरेको लगायतका समस्या आएपछि सशस्त्र प्रहरीले आगामी माघबाट पुन राशन ठेक्कामा दिने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । राशन ठेक्कामा दिने प्रक्रियाकालागी सशस्त्रले गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी वल ब्यारेकमा बस्ने भएकाले रासन वाफतको रकम व्यक्तिको खातामा जांदा मेस नै नराम्रोसंग प्रभावित भएपछि आईजीले यस्तो निर्णय गरेका हुन । त्यसैगरि धेरै जसो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी हेडक्वार्टरमा मात्रै बस्न खोजेपछि मुख्यालयले आगामी असोजबाट मुख्यालयमा नै मेस शुरु गर्ने भएको छ । विहान १० बजे आउने ५ बजे घर फर्किने परिपाटीको अन्त्य गरेर मुख्यालयले विहान ७ बजे नै मुख्यालयमा हाजिर गराउने र मेश सञ्चालन हुने भएको छ ।
आईजी खनालले विदेश मिसनबाट फर्किने सशसत्र प्हरी कर्मचारीबाट विभिन्न शिर्षकमा उठाईदै आउको जनहि एक सय ५० डलर पनि आगामी माघबाट नकाट्ने निर्णय गरेको छ । भुपु संगठन, महिला श्रीमती संघ, खेलकुद लगायतका शिर्षकमा यसअघि विदेश मिसनमा जाने सशसत्र प्रहरी कर्मचारीबाट जनही सो रकम उठाईदै आएको थियो ।